August 2021 - Online Hartha
အဖျောအိပျပေးမယျ့ကလေးတှေ မရောကျခငျ ခြိုးခြိုးခြှတျခြှတျသံကွားလို့မသိမသာကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ
August 31, 2021 by Online Hartha
အဖော်အိပ်ပေးမယ့်ကလေးတွေ မရောက်ခင် ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်သံကြားလို့မသိမသာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ… အသက်၄၀ နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်သော အပျိုကြီးတစ်ယောက်… ကူဖော်လောင်ဖက်လည်း မရှိတော့ ညကျရင် အိမ်နီးချင်း သူငယ်မလေးတွေကို ခေါ်ပြီး အိပ်တယ် …။ တစ်ည အဖော်အိပ်ပေးမယ့် ကလေးတွေမရောက်ခင် ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်သံ ကြားလို့ မသိမသာကြည့်လိုက်တော့ သူခိုး ကပ်နေမှန်း သိလိုက်တယ် …။ ကြောက်လည်း ကြောက်တယ်၊ ရှိစုမဲ့လေးတွေပါသွားမှာလည်း စိုးတယ်၊ အော်လိုက်ပြန်လည်း သူခိုးက ဒီအတိုင်းထွက်ပြေးရင်တော်ရဲ့ သူမကို ရန်ပြုမှဖြင့် …။ ခဏနေတော့ အကြံရသွားတယ်။ ဟဲ့ ကောင်မလေးတွေ ညည်းတို့ကို ငါပုံပြင်ပြောပြမယ်ဆိုပြီး သူ့ဘေးမှာ လူရှိနေသလို အသံခပ်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောတယ် …။ ဟုတ်ကဲ့ နားထောင်မှာပေါ့ရှင့် ဆိုပြီး ကောင်မလေးတွေက ပြန်ပြောလေဟန် အသံဖျက်ပြီး သူ့ဟာသူ ပြောပြန်တယ်။ ပြီးတော့ ပုံပြင် … Read more
သူကြွယ်ကြီးနဲ့ ဇနီးမယား လေးယောက်(အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်ခန်းစာလေးပါ အချိန်လေးခဏပေးလို့ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး)
(အရမ်းကောင်းတဲ့ စာစုလေးပါ။ အချိန်လေးခနပေးလို့ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး ) သူကြွယ်ကြီးနဲ့ မယားလေးယောက် တစ်ခါတုန်းက အရမ်းကို ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ဦးရှိတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မှာ မိန်းမ လေးယောက်ယူထားတယ်။ လေးယောက်လုံးကလဲ တစ်အိမ်ထဲနေပြီးတော့တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကလဲ ချစ်ခင်ကြတယ်။ ၄ ယောက်မြောက်မိန်းမကိုတော့ သူဌေးကြီးက အချစ်ဆုံးပဲ။ အဲ့မိန်းမကို ၀တ်ကောင်းစားလှတွေ အချိန်တိုင်း ဆင်ပေးပြီးတော့ဖျားနာတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် အချိန်ပေးပြိးတော့ ဂရုစိုက်တယ်။ သူကဂရုစိုက်ပေမယ့် သူ့မိန်းမကတော့ သူ့ကို ဘာမှပြန်မလုပ်ပေးဘူး။၃ ယောက်မြောက်မိန်းမကိုလဲ တော်တော်ချစ်ရှာတယ်။ အဲဒီမိန်းမအတွက် အချိန်တွေပေးထားတယ်။ အလုပ်တွေကြိုးစားတယ်။ အဲဒီမိန်းမက သူ့အတွက် စီးပွားရေးလဲ တစ်ဖက်တစ်လမ်းလုပ်ပေးသေးတယ်။သူဌေးကြီးကတော့ အဲဒီမိန်းမက တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ပါသွားမှာကို အရမ်းစိုးရိမ်တယ်။ ၂ ယောက်မြောက်မိန်းမကိုလဲ အလွန်ချစ်တယ်။သူက အတွေးအခေါ်ကောင်းတယ် စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။တစ်ခါတစ်လေ သူဌေးကြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေရင်တောင် ထွေးပွေ့ပြီး အားပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ပထမမိန်းမကိုတော့ … Read more
နှုတျခမျး၊ မေး၊ ပါးစောငျးရှဲ့၊ အဆဈရောငျ၊ အကွောထုံခွငျးမြားအတှကျ ဆေးဖကျဝငျအပငျ
ဆေးဖက်ဝင်အပင် လင်းနေ “ကလေး လေထိုးပြီး ငိုနေလို့ လင်းနေ တစ်တက်လောက် ပေးပါလား….ဦးရယ်” ဆိုပြီးလာတောင်းသော ကလေးမိခင်အသံများကို ကြားယောင်မိနေသည်။ လင်းနေကို လင်းလေဟုလည်းခေါ်ကြသေးသည်။ ပင်ပျော့ ပင်ငယ်မျိုးဖြစ်သည်။ အမြင့်သုံးပေခန့်အထိ မြင့်တက်သည်။ မြေအောက်ပင်စည် ဖြစ်သည်။ အနံ့ထင်ရှားသည်။ ပင်စည်သည် ဥတက်သဖွယ် ဖြစ်သည်။ဥရှိ အဆစ်များ အဖြူရောင်ရှိသည်။ ရှည်လျားသော ပန်းခိုင်ပေါ်တွင် အပွင့်များစွာ ပွင့်သည်။ စိမ်းဝါရောင်ရှိသည်။အဖူးခွံ အစိမ်းရောင်ရှိသည်။ အရွက်နှင့်တူသည်။အေးမြသော ရာသီဥတုရှိသည့် ဒေသများရှိ အင်းအိုင် ချောင်းမြောင်းတစ်ဝိုက်တွင် ပေါက်သည်။ သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။ အိမ်သုံးဆေးအဖြစ် အသင့်အတင့် စိုက်ပျိုးကြသည်။စိုက်ပျိုးရာတွင် ချင်းကဲ့သို့ပင် စိုက်ပျိုးရသည်။ အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း- မြေအောက်ပင်စည်ကို အသုံးပြုကြသည်။ အာနိသင် မြန်မာ့ဆေးကျမ်းများအလိုအရ လင်းနေသည် စူးရှသော အနံ့ရှိသည်။ ခါးသည်။ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းအရသာရှိသည်။ နူးညံ့စွာ … Read more
Categories ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ Leaveacomment
ကလေးသူငယျတှေ အထူးသတိထားရမယျ့ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ အရာတဈခု
ကလေးသူငယ်တွေ အထူးသတိထားရမယ့်အရာတစ်ခု ရေစိမ်လိုက်ရင် ပွတက်လာတတ်တဲ့ အရောင်လှလှလေးတွေနဲ့ အလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေကို သိကြမှာပါ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ကလေးငယ်တွေကို သေစေတဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ တရုတ်ပြည်အှ လင်မယားစုံတွဲတစ်တွဲဟာ သူတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးကို Polymer Balls လို့ခေါ်တဲ့ ဒီအလုံးထုပ်လေးကို သကြားလုံးအထင်နဲ့ ဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်က အလုံးလေးတစ်လုံးစမ်းစားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဒါဟာ သကြားလုံး၊အချိုမုန့်မဟုတ်ဘဲ Polymer Balls တွေဖြစ်နေကြောင်းကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးဟာ အထုပ်တစ်ဝက်နီးပါးစားပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ အဆိုပါလင်မယားဟာ ကလေးငယ်ကို ဆေးရုံကိုခေါ်သွားပြီးဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါ ဗိုက်ထဲမှာ Polymer Balls တွေ ပွတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကလေးငယ်ကိုခွဲစိတ်မှုအမြန်လုပ်ပြီးကယ်တင်ခဲ့ရပါတယ်။ Polymer Balls ဟာ ကလေးငယ်တွေအတွက် ကစားစရာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ရေအင်မတန်စုပ်ပါတယ်။ ရေထဲမှာစိမ်ထားတဲ့အခါ ပွတက်လာပြီူ သက်ဆိုင်ရာအရောင်အတိုင်း လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် … Read more
သာသနာပြုမင်းပေါ်မည့်အချိန်နှင့်ပျောက်ဆုံးသွားသော သဲအင်းဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ နဂါးပလ္လင်ပြန်ပေါ်လာမည့်အချိန်
သာသနာပြုမင်းပေါ်မည့်အချိန်နှင့် ပျောက်ဆုံး သွားသော သဲအင်းဂူ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ နဂါးပလ္လင် ပြန်ပေါ်လာမည့်အချိန် သဲအင်းဂူ ဆရာတော်ကို လူတို့သာမက နဂါးမင်း များကပါ ကြည်ညို ကြလေသည်။ ထိုကြောင့်လဲ ဆရာတော် အတွက် ပလ္လင်ပြုလုပ်ရန် အတွက်ကို အထူးကောင်း မွန်လှသော သစ်ကနက်ပင် များဖြင့် နဂါးပလ္လင် ပြုလုပ်ရန် လူတို့အား အိမ်မက်ပေးကာနေရာပြ လေသည်။ ဆရာတော်တွက် ပလ္လင် ပြုလုပ် ပြီး၍ တရား ဟောသော အခါ နဂါးများလည်း လာရောက်နာကြားလေသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ဆရာတော် ခန္ဓာဝန်ချ သွားသည့်အခါ နဂါးပလ္လင်လည်း ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံး သွားသည်။ ထိုနဂါး ပလ္လင်ကြီးသည် ဆရာတော်ကို ကြည်ညိုသော နဂါးမင်းများမှ မိုးကြီးလေကြီး ချစေကာ လူသူမရှိသော အချိန် … Read more
မိမိနအေိမျကို မကောငျးသောအရာမြားကနေ ကာကှယျတားဆီးပေးနိုငျတဲ့ သဈဂပြိုးနဲ့ လောကီပညာရပျ…
မိမိနေအိမ်ကို မကောင်းသော အရာများကနေ ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ သစ်ဂျပိုးနဲ့ လောကီပညာရပ် သစ်ဂျပိုးအမှုန့် အနည်းငယ်ကိုယူပြီး နေအိမ် ဝင်ပေါက်မှာ ဖြန်းပေးပါ… မကောင်းတဲ့အရာတွေအိမ်ထဲကို မဝင်စေဘူး အတိုက်အခိုက်ကင်းတယ် လာဘ်ပွင့်စေတယ်… သစ်ဂျပိုးအနည်းငယ် ဆနွင်းအနည်းငယ်ကို ရေထဲထည့်ပြီး ရေချိုးပေးရင်မကောင်းတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ အညှိတွေ သန့်စင်စေတယ် ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရရှိစေတယ်… စန်းပွင့်လာဘ်ပွင့်စေပါတယ်…သစ်ဂျပိုးမှုန့်အနည်းငယ်ကို နေအိမ်ထောင့်တွေမှာ ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် မကောင်းတဲ့အရာတွေကင်းစေပြီး နေအိမ်ကိုအေးချမ်းစေပါတယ် ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေရစေပါတယ်… သစ်ဂျပိုးအတောင့်လေးကို နေအိမ်ပြတင်းပေါက်တွေမှာထားပေးမယ်ဆိုရင် နေအိမ်ကို မကောင်းသော အရာများကနေ ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ် သတင်းကောင်းတွေ ကြားရတတ်ပါတယ်… သစ်ဂျပိုးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေပါသည်…။ #Credit Unicode Version မိမိနအေိမျကို မကောငျးသော အရာမြားကနေ ကာကှယျတားဆီးပေးနိုငျတဲ့ သဈဂပြိုးနဲ့ လောကီပညာရပျ သဈဂပြိုးအမှုနျ့ အနညျးငယျကိုယူပွီး နအေိမျ ဝငျပေါကျမှာ ဖွနျးပေးပါ… မကောငျးတဲ့အရာတှအေိမျထဲကို … Read more
ခုခေတ်မှာ မြန်မာမိန်းကလေးအများစု ဘယ်လိုဘဝပျက်သွားသလဲဆိုတာ သိစေချင်လို့ ဒီpostကို တင်ရတာပါ
ခုခေတ်မှာ မြန်မာမိန်းကလေးအများစု ဘယ်လိုဘဝပျက်သွားသလဲဆိုတာ သိစေချင်လို့ ဒီ post ကို တင်ရတာပါ ။ အစအဆုံးဖတ်ပြီးရှယ်ပေးလိုက်ပါနှမချင်းကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင်ပေါ့ ” အရမ်းချစ်တယ် ချစ်ရယ် “” မောင်ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင် “”မောင် ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးပါနော့်”” ဟင်အင်း မောင် ”” ချစ် ကြောက်တယ် မလိုက်လျောပါရစေနဲနော် မောင် “” ချစ်ကလည်းကွာ “” မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါကွာ ” “ဟင်အင်း မောင့်”” ကျွန်မ တို မိန်းမသား ဘဝ မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အပျိုစင် ဘဝ လေးကိုတော့ လက်မထပ်ရသေးပဲ “ ” မပေးဆပ်ပါရစေနဲ မောင် ”” တစ်သက်လုံး တန်ဖိုးထားလာရတဲ့ “” အပျိ … Read more
ခြှေးမလောငျးမှ ယောက်ခမလောငျးထံသို့ မတ်ေတာရပျခံခကျြမြား
စာသားတွေ အရမ်း‌ကောင်းလို့ မျှဝေပေးတာပါ လင်မယားကိစ္စတွေကို ဝင်မပါပါနဲ့.. သားနဲ့ တီးတိုးပြောဆိုတာဟာ ချွေးမဖြစ်သူကို စိတ်ဆင်းရဲစေတယ်ဆိုတာ သိထားပါ. . . သားဖြစ်သူဆီက တောင်းစရာရှိရင် ချွေးမအရှေ့မှာ တောင်းပါ… မိသားစုကိစ္စတွေမှာ ချွေးမဖြစ်သူရဲ့အကြံဉာဏ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တောင် အသိပေးပါ…။ သူလဲ မိသားစုဝင်လို ခံစားနားလည်ပါစေ . .သားဖြစ်သူ မှားမှားမှန်မှန် ချွေးမဘက်က ရပ်တည်ပေးပါ. . ချွေးမ မှားနေခဲ့ရင် ဆူဆဲအော်ဟစ်ပြီး လင်မယားချင်းရန်တိုက်ပေးမယ့်အစား သမီးတယောက်လို ဆုံးမအကြံဉာဏ်ပေးပါ . . ချွေးမဖြစ်သူရဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပေးပါ…။ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုရအောင် စာနာနားလည်ပေးပါ .ကိုယ်ဝန်ဆောင် ချွေးမကို ဂရုစိုက်ပေးပါ . . .ချိုသာပြီးအေးဆေးတဲ့ လေသံနဲ့ သားဖြစ်သူကို ကိုယ်ဝန်‌ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေ . . ပြုစုခဲ့ပုံတွေ .ငယ်ဘဝတွေ … Read more
ကုသလို့ မပျောက်ဆုံးနိုင်တော့မယ့် ရောဂါကြီးအတွက် စာအိတ်သုံးစောင်
သူဌေးကြီးတစ်ဦး ကုသလို့ မပျောက်ဆုံးနိုင်တော့မဲ့ ရောဂါ ကြီးကြီး တစ်ခု ခံစားနေရပါတယ်။ သိပ်မကြာတော့တဲ့ အချိန်ကာလမှာ သေတော့မယ် ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိနေတယ်။ သူဌေးကြီးက စိတ်ဆင်းရဲ ဒုက္ခကို တော်တော်လေး ခံစားနေ ရပါတယ်။ အစတော့ အစိုးရဆေးရုံ၊…ပြီးတော့ နာမည်ကြီးတဲ့ ပန်းလိူင်ဆေးရုံ၊ နောက်ဆုံးတော့ ဘန်ကောက်ဆေးရုံ၊ ဘန်မူဂရက်ဆေးရုံ၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်ဝမ် အစရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဆေးရုံတွေပါ မကျန် သွားရောက်ကုသ ပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံး မပျောက်ဆုံးတော့တာနဲ့၊ သူများတွေမိတ်ဆက်လို့၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ တောင်တန်းဒေသ၊ တိုင်းရင်း သမားတော်ကြီးတစ်ဦးဆီကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ သမားတော်ကြီးက လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မေးမြန်းပြီး၊ သူဌေးကြီးကို အောက်ပါ အတိုင်းပြောပြ လိုက်ပါတယ်။ ” ခင်ဗျားရဲ့ ရောဂါဟာ မီးစာလိုပဲ တော်တော်လောင်ကျွမ်းနေပြီ၊ အဲဒီရောဂါကို … Read more
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ထောက်ပြတဲ့ သွေးထွက်အောင် မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်…
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် ထောက်ပြတဲ့ သွေးထွက်အောင် မှန်လွန်းမက မှန်လွန်းသောမြန်မာတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက် 1. လုပ်ငန်းခွင်မှာ အချိတ်အဆက်ထိထိမိမိနဲ့ တစ်စုတစ်စည်း ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ဖို့ အရမ်းအားနည်းတယ်။ (အချိတ်အဆက် အညှိအနှိုင်းလုပ်ဖို့ အလေ့အထ မလုပ်လို၊ အရာရာ ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်သာ ဖြစ်လိုတယ်။) 2. အချင်းချင်း Sharing and Caring (ဖြန့်ဝေဖေးမမှု) ဆိုတာ အရမ်းအားနည်းတယ်။ (မနာလိုအားကြီးလွန်း, ဝန်တိုလွန်လွန်းတယ်။) 3. တစ်ဖက်သားရဲ့ အားနည်းချက်ကိုရှာပြီး တိုက်ခိုက်တယ်၊ ကိုယ် နေရာရဖို့အတွက်ပဲ စဉ်းစားတယ်။ (ဖယ်ထုတ်, ခြေထိုး, ပုတ်ချဖို့ အာရုံထားတယ်။ ရန်ဘက်လို နှိပ်ကွပ်တယ်။ နေရာမက်, နေရာရှာ, နေရာလုချင်ကြတယ်။) 4. ငါ သိ, ငါ တတ်ဆိုတဲ့မာန အရမ်းများတယ် (Ego)၊ ငါ လေ့လာသင်ယူစရာ အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ … Read more